Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » USA CDC "Ka Fogow Safarka" Heerka Hadda laga saaray Jamaica
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa maanta soo dhaweeyay warka sheegaya in Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka (CDC) ay Jamaica ka saartay Heerka 4-aad ee qiimaynta khatarta ah "Ka fogow u safrida Meeshan".
Wasiirka ayaa ku ammaanay maamulka caafimaadka iyo shacabka Jamaica sida ay uga shaqeeyeen hoos u dhigista heerarka caabuqa COVID-19 iyo isbitaallada la seexiyay.
Jamaica waxay hadda ku jirtaa heerka 3, kaas oo ku boorinaysa dadka safarka ah ee Maraykanka in si buuxda loo tallaalo ka hor intaysan safrin.
Ameerikaan iyo guud ahaanba waxay sii wadaan inay u safraan meelaha ay rabaan inay booqdaan.
"Tani waa horumar aad u wanaagsan. Waxaan rabaa inaan amaano maamulkayaga caafimaadka iyo dadka Jamaica ka shaqaynta hoos u dhigida heerarka caabuqyada COVID-19 iyo cusbitaalada, taas oo si fiican u daahfuraysa qiimaynta halistayada. Taas waxa ka baxsan, Waddada Resilient waxay ahaanaysaa meel aad ammaan u ah booqdayaasha iyo shaqaalaha si isku mid ah oo leh heerar tallaal oo sarreeya iyo heerarka caabuqa oo aad u hooseeya."
Jamaica hadda waxay ku jirtaa heerka 3, taas oo dhiirigelinaysa Socotada Mareykanka in si buuxda loo tallaalo kahor safarka. In kasta oo ay jirto qiimaynta halista CDC, dadka Maraykanku guud ahaan iyo ballaadhanba waxay sii wadaan inay u safraan meelaha ay rabaan inay booqdaan.
La-taliyaha sare iyo istaraatiijiyadda ee Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright wuxuu xusay in "Tani runtii waa war wanaagsan. Heerkii hore ee 4 ayaa sababay jahawareer wareegyada qaar waxaana hubaal ah in aanu ahayn indho-indheyn wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego darajadan la wanaajiyey waxay noqon doontaa mid waxtar leh dadaalkayaga hadda iyo aadka u daran ee aan ku xoojineyno dalxiisayaasha ka imaanaya dhammaan suuqyadayada."
Wasiir Bartlett wuxuu hadda ku sugan yahay Boqortooyada Midowday (UK) isagoo wata koox heer sare ah oo ka socota Wasaaradda Dalxiiska iyo Guddiga Dalxiiska Jamaica (JTB) oo ka qeyb galaya Suuqa Socdaalka Adduunka, mid ka mid ah bandhigyada ugu weyn ee ganacsiga dalxiiska caalamiga ah ee adduunka. Waxa ku soo biiray Guddoomiyaha JTB, John Lynch; Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; La-taliyaha Sare & Istaraatiijiyadda, Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright; iyo Agaasimaha Gobolka JTB ee UK iyo Waqooyiga Yurub, Elizabeth Fox.
Ka-qaybgalka Boqortooyada Midowday (UK) wuxuu soo afjarayaa suuq-geynta suuqyada caalamiga ah ee uu hoggaamiyo Wasiir Bartlett iyo saraakiishiisa sare oo ay ku jiraan labada suuq ee ugu weyn Jamaica, Mareykanka iyo Kanada, waxayna ka gaareen guulo waaweyn iyagoo si weyn kor ugu qaadaya duulista jasiiradda iyo xaqiijinta daneeyayaasha COVID- badbaadada la xidhiidha meesha loo socdo. Wasiirka dalxiiska ayaa sidoo kale hogaaminayay kulamo uu ku tagay Dubai, Imaaraadka Carabta iyo Riyadh, Saudi Arabia, taas oo qayb ka noqon doonta furitaanka fursadaha dalxiiska iyo maalgashiga Jamaica.